Friday January 08, 2016 - 22:57:55 in Wararka by Web Admin
Munaasabad aad ubalaaran oo lagu xusayay xuska dhalashada Nabigeeni Maxamed (NNKH) ayaa lagu qabtay Masjidka Albiri ee degmada Kaaraan magaalada Muqdisho. Munaasabadaani oo aheed mid ee siweyn uga soo qeybgaleen Culumaa'udiin, Aqoonyahano, Ganac
Munaasabad aad ubalaaran oo lagu xusayay xuska dhalashada Nabigeeni Maxamed (NNKH) ayaa lagu qabtay Masjidka Albiri ee degmada Kaaraan magaalada Muqdisho. Munaasabadaani oo aheed mid ee siweyn uga soo qeybgaleen Culumaa'udiin, Aqoonyahano, Ganacsato iyo sidoo kale dadweyne isaga kala yimid gudaha degmada kaaraan iyo xaafadaha kale ee magaalada Muqdisho.
Munaasbaadaani ayaa qatin iyo gunaanad u aheed raatibki soo socday tan iyo bilashada bisha Mowliid oo ah bil ku asteesan dhalashada Xabiibkeeni Maxamed (NNKH) oo ah maalmo ku weyn shucuubta islaamka isla markaana si siman daafaha caalamka looga dabaal dego dhalashada Xabiibulaahi Maxamed (NNKH).
Masjidka Albiri ee degmada Kaaraan oo kamid ah masaajidyada bishaan oo idil si taxane ah habeen walba looga aqriyo siirada Rasuulka (CSW) ayaa waxa gunaanadka bisha Mowliid waxa lagu qabtaa munaasabad af meyr u ah raatibyadi taxana ahaa iyadoo sidoo kale munaasabadaasi lagu casuumo.
Culumaa’udiin sharaf iyo cisi kudhax leh bulshada Soomaaliyeed iyagoo isla markaana halkaa kasoo jeediyo mowduucyo ku haboon munaasabadaani iyo sida looga baahan yahay bulshada soomaaliyeed iney weyneeyaan maalmaha ceynkaan ah .
Culimadi sida weyn uga hadashay xaflada ayaa waxa kamid ahaa Sheekh maxamuud dufle, sheekh cumar axmed cadaawe, sheekh cali sheekh maxamuud sheekh (Sheekh Cali Dheere), Sheekh daaud sheekh muxumud sheekh cabdi celi , sheekh ismaaciil cali cumar, iyo mashaa iq kale oo fara badan
Gabagabadi Xaflada ayaa waxa Umahad celiyay dhamaan dadki kasoo qeybgalay Xaflada, Sheekh Ismaaciil Cali Cumar oo ahaa maamulaha guud ee Masjidka isla markaana kawakiil ah Ganacsade Xaaji Xasan Warsheekh oo ah aas aasaha masjidka.